ဓါတျပုံလေးတဈပုံကွောငျ့ ပွညျပရောကျနပွေီ ဆိုပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ဝဖေနျမှုတှေ မွငျ့တကျနတေဲ့ အာဇာနညျ – Shwe Likes
Shwe | January 29, 2022 | Celebrity | No Comments
ဓာတျပုံ ထဲမှာ သူကို ငျထားတဲ့ ကျောဖီခှကျတ ဈခှကျကွောငျ့ ပွညျပရော ကျနပွေီ ဆိုပွီး ပရိသတျေ တှရဲ့ဝဖေ နျမှုတှေ မွငျ့တ ကျနတေဲ့ Rဇာနညျ
အဆိုတျော အာဇာနညျ လို့ ဆိုလိုကျရ ငျတော့ အနုပညာ လမျွးေ ကာငျး ပျေါမှာ ၁၀ နှဈမကရပျတညျလာခဲ့တဲ့သူ ဆိုရငျတော့ မသိသူမရှိေ လာကျပါ ဘူးနျော.. အသံပါဝါေ ကာငျးကောငျးနဲ့ သီဆိုတတျသူ ဖွ ဈတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ အားပေးကွ မျးနကွေတာ ဖွဈပါတယျနျော..
အာဇာနညျကေ တာ့ သားလေး ၂ ယောကျနဲ့အတူ သမီးလေးတဈေ ယာကျကိုပိုငျဆိုငျ ထားတာေ ကွာငျ့ သာယာတဲ့မိ သား စုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျ ထားသူလညျး ဖွဈပါတယျနျော..
အာဇာနညျ ကတော့ မွနျမွာ ပညျရဲ့ လကျရှိအခွအေေ န မှာလညျး ပွညျသူနဲ့အတူ တဈသားတညျးရပျတညျခဲ့ သူဖွဈတာကွောငျ့ တိမျးရှောငျနေ ရတာ ဖွဈပါတယျေ နျာ.. လှနျခဲ့တဲ့လပိုငျး တုနျးကလညျး ဖခငျကွီးရဲ့မှေးနေ့ ကိုလညျး အဝေးကနပေဲ က နျတော့ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော..
တိမျးရှောငျတဲ့နရော မှာနပွေီးတော့ လညျး မိသားစုကို လှမျးနကွေမှာ အသအေခြာပါပဲနျော. အဆိုတျော အာဇာနညျကတော့ မိသားစုကို ပါ လှတျမွောကျနယျမွကေို ချေါသှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော..
ဒီနလေ့ေး မှတော့ အာဇာနညျ က ကျောဖီခှကျေ လးကိုငျထား တဲ့ ပုံလေးတဈပုံ ကို တငျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော။ Rဇာနညျကို ငျထားတဲ့ ကျောဖီခှကျက နိုငျငံရပျွ ခားမှာပဲ ရရှိနိုငျတဲ့ ကျောဖီ ဆိုပွီးလူ အမြားစု ကတော့ အခြိနျတနျရငျ ပွညျပ နိုငျငံကိုပဲ ထှကျပွေးတာ ပဲလားဆိုတဲ့ ကောမနျ့ေ တှအပွငျ မွနျမာနိုငျငံမှာ နလေို့ 
မရတော့လို့ ပွညျပ နိုငျငံကိုသှားတာ လကျခံပါတ ယျဆိုတဲ့ကောမန့ျတှနေဲ့ အပွနျအလှ နျရေးသားပွီး ပှဲဆူ နကွေတာ ဖွဈပါတယျနျော။ ပရိသတျွ ကီးလညျး R ဇာနညျရဲ့ပုံလေးကို ကွညျ့ပွီး တဈခုခုေ ရးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော..Credit ;
ဓာတ်ပုံ ထဲမှာ သူကို င်ထားတဲ့ ကော်ဖီခွက်တ စ်ခွက်ကြောင့် ပြည်ပရော က်နေပြီ ဆိုပြီး ပရိသတ်ေ တွရဲ့ဝေဖ န်မှုတွေ မြင့်တ က်နေတဲ့ Rဇာနည်
အဆိုတော် အာဇာနည် လို့ ဆိုလိုက်ရ င်တော့ အနုပညာ လမ်ြးေ ကာင်း ပေါ်မှာ ၁၀ နှစ်မကရပ်တည်လာခဲ့တဲ့သူ ဆိုရင်တော့ မသိသူမရှိေ လာက်ပါ ဘူးနော်.. အသံပါဝါေ ကာင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုတတ်သူ ဖြ စ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက အားပေးကြ မ်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
အာဇာနည်ကေ တာ့ သားလေး ၂ ယောက်နဲ့အတူ သမီးလေးတစ်ေ ယာက်ကိုပိုင်ဆိုင် ထားတာေ ကြာင့် သာယာတဲ့မိ သား စုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်..
အာဇာနည် ကတော့ မြန်မြာ ပည်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအေ န မှာလည်း ပြည်သူနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့ သူဖြစ်တာကြောင့် တိမ်းရှောင်နေ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်ေ နာ်.. လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်း တုန်းကလည်း ဖခင်ကြီးရဲ့မွေးနေ့ ကိုလည်း အဝေးကနေပဲ က န်တော့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
တိမ်းရှောင်တဲ့နေရာ မှာနေပြီးတော့ လည်း မိသားစုကို လွမ်းနေကြမှာ အသေအချာပါပဲနော်. အဆိုတော် အာဇာနည်ကတော့ မိသားစုကို ပါ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ခေါ်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
ဒီနေ့လေး မှတော့ အာဇာနည် က ကော်ဖီခွက်ေ လးကိုင်ထား တဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံ ကို တင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ Rဇာနည်ကို င်ထားတဲ့ ကော်ဖီခွက်က နိုင်ငံရပ်ြ ခားမှာပဲ ရရှိနိုင်တဲ့ ကော်ဖီ ဆိုပြီးလူ အများစု ကတော့ အချိန်တန်ရင် ပြည်ပ နိုင်ငံကိုပဲ ထွက်ပြေးတာ ပဲလားဆိုတဲ့ ကောမန့်ေ တွအပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေလို့ 
မရတော့လို့ ပြည်ပ နိုင်ငံကိုသွားတာ လက်ခံပါတ ယ်ဆိုတဲ့ကောမန့်တွေနဲ့ အပြန်အလှ န်ရေးသားပြီး ပွဲဆူ နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ြ ကီးလည်း R ဇာနည်ရဲ့ပုံလေးကို ကြည့်ပြီး တစ်ခုခုေ ရးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်..Credit ;